Smach Z, Gamer PC iray manontolo eo am-pelatananao | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | | an-trano, Videogames
Androany dia te hiresaka momba ny tetikasa somary tsy manam-paharoa izahay, ny Smach Z dia mikendry ny hitondra ny tombotsoan'ny Steam sy ny lalao video eo amin'ny lampihazo PC, ho eo an-tànantsika. Mba hahafahantsika mankafy ny lalao ankafizintsika nefa tsy mila miahiahy be loatra momba ny toerana, ary miresaka mazava tsara momba ny console console, karazana iray izay somary hadino tato ho ato, hatramin'ny andiany vaovao an'ny console desktop sy ny tsenan'ny horonantsary Mobile lalao no iray izay maka ny ankamaroan'ny mofomamy lalao video.
Ity console ity dia manana AMD SoC miaraka amin'ny famaritana natao ho an'ny fanjifana ambany. Na izany aza, ny atahorantsika dia ny mifanentana. Mampanantena izany ireo mpamorona tetikasa hisy lalao video miisa 10.000 amin'ny fanombohana ny console, mivantana ao amin'ny tranombokinay Steam. Olana lehibe iray hafa ny batery, tsy fantatsika hoe ohatrinona no hatolony, na farafaharatsiny isalasalantsika izany, satria ny mpandraharaha dia manome lalao maharitra 5 ora tsy tapaka.
Raha hivezivezy amin'ny ambaratonga dia hanana fanaraha-maso roa amin'ny havia sy havanana isika, miaraka eo ambanin'ny tokon-kazo ankavia sy bokotra hazo fijaliana eo ankavanana. Raha resaka famolavolana dia angamba mampatsiahy antsika PSP be dia be io.
Andao handeha miaraka amin'ireo isa, a CNy AMD's PU, ny Merlin Falcon, dia nahatratra 2,1GHz. Saika zava-dehibe izany, ny GPU dia ho Radeon R7 koa avy amin'ny AMD. Mikasika ny RAM kosa dia hanolotra modely misy 4GB sy maodely hafa izy «Pro»Miaraka amin'ny 8GB. Toy izany koa no hita amin'ny fitehirizana tanteraka, 64 GB ho an'ny kinova mahazatra, hatramin'ny 128 GB ho an'ny kinova "Pro". Raha ny efijery, HD 6-inch Full HD.
Amin'ny lafiny fifandraisana, Bluetooth sy WiFi ho an'ny rehetra, 4G LTE ho an'ny kinova Pro ary fakan-tsary 1,3MP. Navoaka toy ny tsy ao anaty ilay fitaovana Kickstarter, ary efa nahatratra $ 211,00. Ny fanombohana ofisialy dia andrasana amin'ny volana aprily 2017, ny maodely fototra ho an'ny $ 306 ary ny Pro ho $ 438.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Smach Z, Gamer PC iray manontolo eo am-pelatananao
Izay tsara jerena!
Apple no hanatrika voalohany amin'ny Mobile World Congress 2017